June 1, 2007, 5:39 am
– သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာ လူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်
– မိဘတွေဟာ ချစ်လှစွာသော သားသမီးတွေအတွက်
– ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမတွေဟာ သူတို့တပည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက်
– ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ညီတော်နောင်တော်တွေအတွက်
– ရဟန်၊သံဃာတော်တွေဟာ ဒကာဒကာမတွေအတွက်
ပူပင်သောကတွေနဲ့ ရတက်မအေးဖြစ်နေကြရပြီး သောကမီး၊ ဒေါသမီးတွေ တောက်လောင်စပြုလာနေပြီ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲသည်လို ပြည်သူတွေ သောကမီး၊ ဒေါသမီးတွေတောက်လောင်လာအောင်၊ ကာယကံမြောက် ကျူးလွန် စေခိုင်းနေသူတွေဟာ လက်တဆုပ်စာ စစ်အာဏာပိုင်တွေသာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က ——-
သင်တို့ကို အဓမ္မ ဆင့်ခေါ်အသုံးချပြီး ပြည်သူ – ပြည်သူချင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားအောင် ရန်တိုက်သွေးခွဲနေတာဖြစ်တယ်။
– သင်တို့သည်လည်း ပြည်သူလူထုထဲက ပေါက်ဖွားလာသည့် ပြည်သူတွေဘဲ မဟုတ်လော။
– သင်တို့သည်လည်း မိနှင့်ဖနှင့်၊ သားနှင့်မယားနှင့်၊ ညီနှင့်အကိုနှင့်၊ မောင်နှင့်နှမနှင့် အေးအေးချမ်းချမ်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေထိုင်လိုကြသည်ဘဲ မဟုတ်လော။
– သင်တို့သည်လည်း တရားမျှတမှု၊ လွပ်လပ်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုကို လိုလားကြကုန်သည်ဘဲ မဟုတ်လော။
thanks for post DANDON STUDENTS’ Statements for inside burmese peopel.
haha another one. my dearly is very busy for personal —. wht do u think readers about ” linlet’s personal timel. —GUESS
Comment by Anonymous June 1, 2007 @ 5:28 pm